तल स्क्रोल गर्नुहोस् ↓
तपाईंले महामारीको कारण सबैभन्दा छुटाउनुभएको कुरा के हो – परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने, खेल खेल्न जाने वा सामान्य रूपमा भेला हुने? हामी यी सबै कुराहरू फेरि गर्न चाहन्छौं।
This Is Our Shot to be #TogetherAgain भनेको क्यानडा निवासीहरूलाई एकत्र गराउन लक्षित गतिविधि हो र खोप लगाउन हुने हिचकिचाहट बदल्न एकअर्कालाई प्रोत्साहन गर्छ जसकारण हामी एकसाथ मिलेर महामारी अन्त्य गर्न सक्छौं।
To be #TogetherAgain, हुनको लागि, हामीले आफ्नो, आफ्ना परिवार र समुदायहरूको निरन्तर सुरक्षा गर्नुपर्छ। केही मानिसहरूका लागि खोप लगाउन अरूलाई जत्तिको सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर सुरु गरौं। सबैजनासँग उनीहरूलाई सूचित निर्णयहरू गर्न आवश्यक पर्ने तथ्यहरू र जानकारीमाथि पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्न हामी सबैले एकसाथ कार्य गर्नुपर्छ।
This Is Our Shot महामारी समाप्त गर्ने, क्यानडा
कोभिड-१९ खोपसम्बन्धी जानकारी
कोभिड-१९ खोपका [XXXXX] मात्राहरू क्यानडामा प्रबन्ध गरिएका छन्
तपाईंसँग खोप ’bout प्रश्नहरू हुन सक्छन्। तपाईंलाई आवश्यक पर्ने जानकारी ’bout जानकार गराउन तपाईंलाई समर्थ बनाउन मद्दत गर्नका लागि हामी यहाँ छौं जसकारण तपाईं साहसी भएर आफ्नो खोप लगाउन र महामारी अन्त्य गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
तथ्यहरू ’bout जान्नुहोस्। यो हामी फेरि एकसाथ हुने वातावरण ल्याउनका लागि दिइने खोप हो।
तपाईं अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न तयार हुँदा…
आफ्नो प्रान्तमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंलाई आफ्नो प्रान्तीय बुकिङ पोर्टलमा लगिने छ। वा Vaccine Hunters Canada मा जानुहोस्, जसले तपाईंलाई देशभरिका फार्मेसीहरूसहित खोप क्लिनिकहरूमा मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्ने छ।
न्यूफाउण्डल्याण्ड एण्ड लेब्राडर
प्रिन्स एडवर्ड आइल्याण्ड
उत्तर पश्चिमी क्षेत्रहरू
कोभिड-१९ खोपका [XXXXX] मात्राहरू वितरण गरिएका छन्
डाटा क्यानडा सरकारबाट आउँछ
लाइभ टाउन हल्स
This Is Our Shot to be #TogetherAgain ले नियमित लाइभ टाउन हलको कोभिड-१९ जानकारीका बैठकहरू स्ट्रिम गर्छ।
सामेल हुन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
तपाईं सत्रअघि नै वा सत्रको अवधिमा आफ्ना प्रश्नहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम अङ्ग्रेजीमा हुने छ
धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छ
तपाईं कसरी सामेल हुन सक्नुहुन्छ
ही पनि व्यक्ति सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्नाले, खोपले क्यानडामा महामारी अन्त्य गर्न सक्छ भनी तपाईंले सन्देश फैलाउन मद्दत गर्नु हुने छ।
तपाईंको पालो आउँदा खोप लगाउनुहोस्।
एउटा सर्ट खरिद गरेर #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain अभियानमा भाग लिनुहोस्।
आफ्नो खोपको अपोइन्टमेन्टमा आफ्नो सर्ट लगाउनुहोस्र तपाईंले ख्याल राख्ने कोही व्यक्ति (वा केही कुरा) लाई आफ्नो खोपको ब्यान्ड-एड समर्पित गर्नुहोस्।
आफ्नो सर्ट लगाएर र आफ्नो ब्यान्ड-एड देखाएर फोटो वा भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरू र परिवारलाई ट्याग गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न अनुरोध गर्नुहोस्।
साथै अरूलाई जानकार गराउन मद्दत गर्नका लागि #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain प्रयोग गरेर अन्य पोस्टहरू साझा गर्नुहोस्।
सर्ट प्राप्त गर्नुहोस्
सबै प्राप्तिहरू Kids Help Phone परोपकारी संस्थामा जान्छन्।
This Is Our Shotto be #TogetherAgainका ’boutमा
जनसाधरण संस्था, क्यानडाभरिका स्वास्थ्यकर्मी र क्यानडाका केही प्रख्यात निगमहरूले खोपहरूको सुरक्षा र साहसी भएर हिचकिचाहट बदल्ने ’bout जानकार गराउने आवश्यकता देखेका छन्। उनीहरूले खोप लगाउन हुने हिचकिचाहट अभिभूत गर्नका लागि एउटा संगठित प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गरिएको संयुक्त समूहको रूपमा एकसाथ काम गर्न एकदमै प्रभावकारी हुने छ भनी निर्धारण गरेका छन्।
अहिले #TogetherAgain हुने This Is Our Shot एकल ब्यानरअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिका कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, संगठित क्यानडा र परिचित तथा प्रभावशाली मानिसहरूको नेटवर्क क्यानडा निवासीहरूका बीच खोप लगाउने साहस बढाउन आफ्ना समय र स्रोतहरू समर्पित गरिरहेका छन्।
This Is Our Shot to be #TogetherAgain हुने अभियानमा उदारतापूर्वक योगदान दिनुभएका हाम्रा साझेदारहरूलाई धन्यवाद.
Deprecated: 3.1.0 संस्करण देखि _register_controls अप्रचलित भएको छ ! बरु Elementor\_Controls_Stack::register_controls() प्रयोग गर्नुहोस् । in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5323